महानगरको बेइज्जत भयो भन्दै खुलामञ्चमा खाना खुवाउन बन्देज – News Of Global
महानगरको बेइज्जत भयो भन्दै खुलामञ्चमा खाना खुवाउन बन्देज
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा खाना खुवाउँदा महानगरको बेइज्जत भएको भन्दै खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको छ । सडकमै खाना खुवाउँदा आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै महानगरपालिकाले खाना वितरण गर्न रोक लगाएको हो ।
केही अभियन्ताहरुले लामो समयदेखि खुलामञ्चमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरीब र असहायलाई खान वितरण गर्दै आएका थिए । तर, तीनदिन यता महानगरले नगर प्रहरी पठाएर खाना वितरण गर्न रोक लगाएको हो । पहिलो पल्ट ३ दिनअघि नगर प्रहरीले खाना खुवाउने अभियान रोक्न आग्रह गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले पुनः सोमबार नगर प्रहरी पठाएर खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको एकजना अभियन्ता बद्रीप्रसाद ढुंगानाले बताए । सईको नेतृत्वमा पुगेको नगर प्रहरीको टोलीले ‘मेयरसापको आदेश’ भन्दै खाना वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
सार्वजनिकस्थलमा फोहोरसमेत भएको र सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएकोले खाना खुवाउन नदिने निर्णय भएको महानगर स्रोतले बताएको छ ।
कुन अस्पताललाई कति कोटा अक्सिजन ? यस्तो छ तालिका !
केपी ओली भए तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री, आज २ बजे सपथ ग्रहण